China Iikati kunye nezinja bath bath ecocekileyo i-massage ibrashi iiglavu zeminwe ezintlanu kunye nabenzi | UMiaSein
Amakati nezinja zihlamba i-massage ecocekileyo iiglavu zeminwe ezintlanu
Igama lemveliso: Amakati nezinja zihlamba i-massage ecocekileyo iiglavu zeminwe ezintlanu
Inkcazo: Umsebenzi ogqibeleleyo, ngokuhambelana noyilo lwe-ergonomic, abanini kulula ukudibanisa, izilwanyana zasekhaya ziyakonwabela ukudibanisa, iqhosha elinye lokucoceka kweenwele, ukulungeleka, ukugcina abasebenzi. Ukuhlamba imizuzu emi-2 kunokukhuthaza ukujikeleza kwegazi kunye nokwenza ukuba iinwele zesilwanyana zikhazimle ngakumbi. Inokucoca iintakumba kunye nezinye izinto ezimdaka kwiinwele zezilwanyana kunye nejeli ekhethekileyo yokuhlamba izilwanyana
Indlela yokudibanisa: ngokomyalelo wokulungiswa kweenwele kunye nokukhula, ukusukela entloko ukuya emsileni, ukusuka phezulu kuye ezantsi, ukusuka entanyeni ukuya egxalabeni, emva koko uxukuxe amalungu kunye nomsila. Xa udibanisa iinwele, isenzo kufuneka sithambile kwaye siqwalasele, singabi rhabaxa kwaye somile, ukuthintela ukubangela iintlungu enjeni, ngakumbi xa kukanywa iinwele kufutshane neendawo ezibuthathaka (ezinje ngamalungu angaphandle).
Igama lomxholo: Izixhobo zePet
Ubungakanani (nge-cm): Yi-12cm ubude, i-13cm ububanzi no-3cm ubukhulu
Phawu: Ukuphulula izilwanyana kunye nokucoca iinwele zabo
Inzalo efanelekileyo: Ifanelekile ibhegle, poodle, Pomeranian, Alaskan, njl
Indlela yokuhlamba: Indlela yokuhlamba: Le mveliso inokuhlanjwa kuphela ngamanzi. Nceda yome ngetawuli eyomileyo emva kokuhlamba. Nceda uhlambe ngokwahlukileyo kwizinto zabantu
Nceda uqaphele: Le mveliso iyilelwe kwaye yaveliswa ngokukodwa yinkampani yethu. Le mveliso ayixhasi ulwenziwo. Musa ukubeka imveliso apho abantwana banokuyifumana khona. Musa ukunika imveliso kubantwana. Le mveliso ibukhali, nceda uphephe ukubamba nokudlala kwabantwana, nceda u-odole ngokwemeko yezilwanyana zasekhaya. Xa usebenzisa, nceda ucoce iinwele ngokufanelekileyo ukunqanda ukonakalisa ulusu lwesilwanyana kunye nokubangela ingxaki kuwe nakwisilwanyana sakho. Nceda ucoce ngokungqinelana nendlela yokucoca. Ukuba awonelisekanga yile mveliso, nceda unxibelelane nenkonzo yabathengi.
Egqithileyo Ibhulukhwe yenja yabasetyhini ibhulukhwe yeTeddy ibhulukhwe yoGolide yoKhuseleko lokuya exesheni Inja yeZempilo kweNja Impilo yokulwa ukuhlukunyezwa kwe-Estrus yangaphantsi
Okulandelayo: Iimpahla zenjana yenja yabasetyhini uTeddy Bichon idyasi yomqhaphu Chihuahua Ukulwa neCorgi amantshontsho amancinci aqinisa impahla yasekwindla nasebusika
Inja yeNest Pet Ukulala Mat Inja Ibhedi Inja M ...
Isixhobo samanzi 3.8L Pet eziphathekayo eziphathekayo ...